Buy ကျီးပေါင်းအနှိပ်စက် (42,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Royal Akarit
Price- 42000 Ks.
-ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အာရုံကြောများကို ပြေလျော့စေပါသည်။
-ခန္ဓာကိုယ်၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုလည်း မြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
- သတိပြုရန် (10-20) မိနစ် အသုံးပြုရန်အကြံပြုထားပြီး မိနစ် 20 ထက်ပို၍ အသုံးမပြုရပါ။
- အသုံးမပြုချိန်ကြာမြင့်ပါက ဘက်ထရီယိုစိမ့်ခြင်းမဖြစ်ရန် ဘက်ထရီကိုဖြုတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ပစ္စည်းကို အရက်ပျံဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းမပြုရပါ။
- AAA ဘက်ထရီ2လုံးကိုအသုံးပြုရပါတယ်။
7. Power supply:2x AAA dry cell (not included)
1. Ring traction：Our product adopts the movable elastic rubber, 360 degree full fit close to the neck, so that the cervical spine can be properly stressed
2. Double loop 3D veneer: Using two oval metal veneer, larger contact area, massage effect is more significant
3. Multi-directional floating vibration massage：
4. Magnetic effect: the built-in health magnet, formingathree-dimensional spiral closed loop magnetic field
5. Electric pulse massage: built-in two electric pulse conductive film, simulation of five Chinese massage mode, relieve neck fatigue (massage, acupuncture, acupressure, kneading, beat)
Meridian physiotherapy paste:
It suits for rheumatic arthritis, pericarditis of shoulder, lumbar muscle degeneration, nerve pain, relieve pain, pain leg and so on. It breaks tradition, one massager , two usages. When you are doing neck massage, you can use meridian physiotherapy pastes at the same time.
.ရန်ကုန်မြို့ အတွင်း အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။မြို့ နယ်အလိုက်ပို့ခ (Delivery Charges)ပေးရပါမည်။နယ်မှ မှာယူလိုသော Customer များကိုလည်း ကားဂိတ် အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
-Order မှာယူလိုပါက နှင့် Comment Box or Chat Boxတွင် မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်
095108505/ 09770764322သို့လည်း မှာယူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။